Waa Maxay Xanuunka Candho-bararku (Mastitis)? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Xanuunka candho-bararku waa xanuun ku dhaca dhamaan xoolaha aynu dhaqano kuwooda dheddiga ah sida, Geela, Lo’da, Adhiga iyo Qooblayda.
Waa maxay xanuunka candho-bararku (Mastitis)? Xanuunka candho-bararku waa xanuun ku dhaca dhamaan xoolaha aynu dhaqano kuwooda dheddiga ah sida, Geela, Lo’da, Adhiga iyo Qooblayda. Xanuunkan xoolaha waxa lagu arkaa wakhtiga uu neefku irmaan yahay waxaana keena bakteeriyooyin dhowr nooc ah sida”Staphylococus Aureus, Streptococcus Agalactiae, dysgalactiae, mycoplasma bovis iyo E.colli”
Xanuunkani waxa uu caan ku yahay inta badan Lo’da loo dhaqdo wax soo saarka caanaha, waana sababta aynu cutubkan lo’da u soo raacinay xanuunkan. Xanuunkan waxa uu ka dhacaa inta badan dunida qaybaheeda kala duwan ee ay ku yaalaan xeryaha caano soo saar ee xoolaha kala duwan sida kuwa lo’da (dairy cattle)
Xanuunkan waxa lagu garan karaa oo uu xoolaha kaga dhacaa candhada, astaamaha ugu badan ee uu muujin karo bukaanku waxa ka mid ah kuwan hoose:
Xanuunku waxa uu noqon karaaa laba qaybood oo kala ah:
Qaybta koowaad oo ah, in uu neefku isaga oo xanuunku hayo aanu wax astaamo muuqda soo soorin laakiin waxa lagu arki karaa caano la’aan iyo gunaad candhada hoose ah.
Qaybta labaad oo ah, in uu bukaanku si fiican u muujiyo astaamo xanuun sida, in ay candhadu casaato, bararto, xanuun iyo kaarna yeelato candhadu.
Waa ay adkaanaysaa in la liso neefka ama ilmuhu jaqo, sababta oo ah xanuun iyo danqasho ayaa uu dareemayaa bukaanku.
In ay candhadu dheecaan iyo nabaro samayso, iyana waa mid ka mid ah astaamaha cudurkani leeyahay.
Ugu dambay bukaanku waxa uu noqonayaa mid caanaha joojiya, isla markaana ay candhadu gudho.
Haddaba marka astaamaha xanuun lagu arko bukaanka waxa muhiim ah in laga joojiyo lisidda iyo jaqidda ilmaha, lana bilaabo daawayn iyo shaybaadh si loo xaqiijiyo noolaha sababay xanuunka iyo ibta xanuunku hayo.
Waxa lagu xaqiijin karaa xanuunkan in bukaanka laga qaado shaybaadh caano ah oo lagu tijaabinayo shaybaadhka candho xanuunka lagu xaqiijiyo ee loo yaqaano (California Mastitis Test), kaas oo si fudud loogu ogaan karo naaska buka, waxaana laga heli karaa xarumaha caafimaadka xoolaha.
Ka hortagga iyo daawaynta cudurka.
Haddii la xaqiijiyo in uu xanuunkani jiro waxa lagu daawayn karaa in la raaco tallaabooyinkan hoose:
In laga joojiyo bukaanka lisidda iyo jaqidda ilaa inta daawayntu dhamaanayso.
In nadaafadda bukaanka si fiican loogu dedaalo, gaar ahaan nadaafadda xerada, candhada cuntada iyo biyaha.
In si fiican loo nadiifiyo candhada neefka, markasta oo candhada laga shaqeeyana lagu dedaalo in neefka cunto taagnida loogu dhigo, wakhtiga ay candhadu qoyan tahay si ay u qalasho candhadu.
In lagu sameeyo neefka nidaamka loo yaqaan gudhin dawayneed ”Dry cow therapy” si uu neefku xanuunka uga soo kabto.
Sida oo kale waxa lagu daawayn karaa bukaanka (Intramamary Atibiotics) , kaas oo loo isticmaalo bukaanka daawooyin badan sida (penicillin streptomycin )
Haddaba la kaasho dhakhtar ama kaaliye caafimaad, haddi aad xoolahaaga ku aragto xanuunkan si qaabka ugu fudud ee daawayneed lagaaga caawiyo.
Tags: Waa Maxay Xanuunka Candho-bararku (Mastitis)?
Next post Waa maxay Cudurka Qoodhe walahu (Brucellosis)?
Previous post Waa Maxay Xanuunka Rifti Faali (Rift valley fever)?